Chinja maratidziro eUTM kuenda kunzvimbo pamwe neExcel - Geofumadas
Shandura UTM kune Geographic Coordinates ne Excel
Kukadzi, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Cartography, Downloads, Google pasi / mamapu
Mutsamba yapfuura tave tati tambo re Excel rekuti tishandure hurumende Geographic UTM kubva pane shati iyo Gabriel Ortiz aive achiwedzera.
Ngationei ikozvino chigadziro ichi chinoita zvakafanana nenzira inopesana, kureva, kuva nehurongwa muUTM format (Universal Traverso de Mercator) uye kuziva nzvimbo, kuvashandura kune maitiro uye nzvimbo dzenharaunda.
Ngatitange kuzvidzidzira pachedu neizvi: maererano neGoogle Earth, mitsuwa ye Palace of Sports muDF ichava X = 489513.59, Y = 2,145,667.38 ichifunga kuti Google Earth inoshandisa WGS84 datum. (pane zvausingazivi, kuona UTM inokurudzira iwe chete kuenda kuzvishandiso / zvisarudzo / vista3D / show lat / kure)
Mune maratidziro enzvimbo, aya angave akareba = -8 ° -5 '-59 ”, lat = 19 ° 24' 18”, (kuratidza giredhi muGoogle Earth, tinya pakanzi "view / grid")
Ndinokurudzira kuti uzvizive nenzira iyi yekuongorora uye kunzwisisa kuti UTM inoronga sei basa kuti uwane zvakanakisisa kubva pane zvishandiso mu Excel.
Ndakaita iyi peji izvo zvingava zvakakosha kune shamwari iyo imwe nguva yapfuura yaitarisira kutumira kuGoogle Earth mamwe data aive muUTM.
1 Nzira yekupinda sei data
Yellow minda vanonhonga xy Coordonatele, uyewo nzvimbo, izvi zvinofanira zvakakwana yokutarisira somuenzaniso Mexico, nzvimbo kubvira 16 21 chete Coordonatele saka unogona kuva munzvimbo dzakasiyana.
Izvo zvinoitika nehemisphere, sezvakaitika kuColombia, Ecuador neBrazil iyo ine nzvimbo munzvimbo dzose dziri kumusoro uye kumaodzanyemba hemispheres.
Uyewo kumucheto wepamusoro ndiyo inonzi spheroid inotungamirirwa neUTM, iyi haisi yehutano huripo asi panzvimbo yehutano huripo.
Iyo mikoko muhomwe ndiyo inoratidzira, hurumende dziri kumabvazuva kweGreenwich meridian ichava yakanaka, iyo iri kumabvazuva kumavirira ichava isina kunaka.
3 Nzira yekuvatumira kuGoogle Earth
Kunyange tisati vaona nzira shoma kutumira munhu Excel ikwidzwe kuna Google Earth nenzvimbo uye UTM, saka tora vatarire, kana uchida kutumira UTM anoona AutoCAD, iyi Excel template inokubvumira kuzviita.
Pano iwe unogona kurodha template yekushandura maratidziro eUTM kuenda kuGeographic.
Unogona kuitenga nayo kadhi rechikwereti.
Coupons Google Earth Office kuti zvinouraya
Previous Post«Previous Excel template kutendeuka kubva ku Geographic Coordinates kuenda kuUTM
Next Post Ndinoda kuisa bhuti rekudhirota, kuti ndiani wandinyora?Next »
109 Inopindura ku "Shandura UTM inoratidzira kune iyo nzvimbo ine Excel"
Svondo, 2020 pa
Jose Solorzano Pinto inoti:
Pfungwa dzese dzekare dzine mazuva apfuura, yanhasi Gunyana wegore ra2020, sezvakaita shanduro dzakadai, tekinoroji yenguva iyoyo yakasiyana nezuva ranhasi, richaramba richishanda here, pane misiyano?
Isu takatumira kune yako email. Chokwadi aive aenda kune imwe spam folda.
Javier Galofre inoti:
Ndangotenga mufananidzo asi hapana chakauya kwandiri. Ungakwanisa here kutarisa kutumirwa kwekuti kwakanaka?
Nenzira, ini ndichangowana iyi webhusaiti uye ndinofarira. Ndichiri kupotsa kwechinguva pazviri, asi zvinoratidzika zvikuru.
Iniwo handiwane kwekuhodha pasi ... Table Iripi tafura inoshamisa?
LUIS LARA inoti:
Handioni kuti ndidzidzise chii !!
Ungatipa muenzaniso here?
va pachena inoti:
Ndinoda kuziva kuti nei ini pandinopinda kune imwe nzvimbo inobatanidza ini ndinotora mhinduro dzakasiyana semuenzaniso
Efrain Peña Borda inoti:
Q purogiramu Windows Vista kana Excel anogona kushandisa uye kukopa kutendeutsa flat anoona enzvimbo kana viseversa, ndinokuvongai pachine wako nzeve ichi.
Jonathan Cardiel inoti:
Chokwadi, zvakawanda kupfuura izvozvo.
Ndinoda kuziva kana ndiine tafura yako ndinogona kutendeuka (kubva kuUTM kusvika ku GEOGRAPHIC) dzakawanda dzinosangana panguva imwe chete. Vakawanda vakaita se1000.
Ini ndakamirira kupindura kwako nokukurumidza, kuvonga.
Hatina template kuti tishandure GTM kuUTM.
pedro luis patino inoti:
Ndine hanya ne tempel yekare yekushandura GTM mazano KUUTM NEMAFOMO
Ndapota nditumirei nhamba yekambani yekukosha kwema template
Svondo, 2012 pa
Hi, ini ndine spreadsheet yepamusoro kuti ndiende kubva kumadhigirii kusvika kune madigiri, maminitsi, masaminiti.
Taura iwe neni
Ndinokutendai, ndinoona kuti ndeipi iyo inofanirwa kubhadhara iyo yandinogona nayo.
Sawa, José Luis.
Hapana chinetso, template ine mazamu uko inotsigira kuti iwe uiise mumutambo wemakumi.
Kana ukangozvitenga, iwe unosangana nesu uye tichakuudza kuti ungazviita sei.
Mudiwa zvandinoda ndeye kugona kugona kujekesa iwo anoratidzira mu MicroStation V8i, asi HandHeld yangu inovatengera kwandiri mumakore ekupedzisira LAT W89.14298 N13.71391, uye ini ndinofanira kuvashandura kuva XY, iyo yekupfuura template inovakumbira muDegree, maminetsi uye Seconds.
Ungandibatsira here neizvi? Ndinokutendai
Kutanga, ndinokutendai nokuda kwekufarira kwenyu.
Tarisa zvauri kutsvaga, sezvo template ino inotendeuka kubva kuUTM kuenda kune imwe nzvimbo asi kune mamwe mawaturo anonyatsoita kuita zvaunoda.
Onai mune izvi humwe humwe hutemberi huripo.
MUBVUNZO UNOGONA KUFANIRA KUDZIDZA KUNA KUTI KUDZIDZA KUDZIDZA KUNYANYA KUNYANYA NOKUDZIDZA KUTI UNOGONA KUVA.
Kwete .iye ari muchinyorwa ichi anogona kungoshandura kubva kuUMMA kuenda ku Geographical.
Asi imwe pamusoro peimwezve nyaya kana iwe ukagona kuita zvaunoda
VICENTE DU inoti:
Iwe unogona kushandisa spreadsheet kuti uchinje nharaunda dzenharaunda
UTM inoronga uye se
Gustavo Hernandez inoti:
Ndinokurudzira peji rangu, pane .exe yakagadzirwa nenzira yeGabriel Ortiz, haisi mvumo asi ini ndinoda kuisa mamwe mazwi, ndinovimba iwe unoshumira, nhume.
Ndingaita sei kuti ndidzoke hutungamiri hweUTM kune geographic coordinates?
Zvakanaka, template inoshanda pasina zvinetso
Kana iwe uchitisiya isu muenzaniso, tinogona kuongorora.
Ndeapi marongero awakapinda, nzvimbo ipi, mhedzisiro yaunoburitsa, nyika yauri iwe uye tinotarisa kuti toona zvinoitika. Usave nyaya yekuparadzanisa nomenclature yezviuru kana decimals.
Hi, ndakatenga spreadsheet, ndinoisa hurumende kuti ndivashandure asi vakandituma kunze kwekondinendi. Zvingave kuti ndezvenharaunda, mune fomu iyi inoisa nzvimbo 15, yeChile iyo inofanira kuisa nzvimbo ipi?
Savio Shaviola, pano tave takasika template inokufarira
Iko hakuna template muGeofumadas yakafanana newaunogara. Kune imwe asi izvo zvainoita ndeyekusandudzika, anotendeuka kubva madhigirii kusvika kuma decimals
Hi, ini ndinoda kutendeudza hutungamiri mune zvidzidzo zvemashumi kusvika kuhutano mumadhigiri, maminitsi nemasekondi.
Chokwadi kurongeka kwako Uye kwakaipa, nekuti latitude inotangira muEcuador uye painosvika El Salvador iri huwandu hunopfuura miriyoni imwe. Tarisa uone nekuti zviri pachena kuti pane dambudziko.
Ndiko kuti munyika muno kusiyana kwehurefu mumadhigiri kunosiyana pakati pe87 ° ne89 ° uye kureba kuri pakati pe13 ° kusvika 14 ° inyika yeCentral America
X = 439188.2040 uye Y = 316859.3910
Hongu asi isu taisaziva chekutaura. Unoziva sei kuti inofanira kupa?
Ndeupi Dhemusi wawakashandisa?
Nyora pano hurumende mumamita, uye isu tichaedza vatendeuki vedu kuti tione kana iwe usina hanya.
tarisa, shandisa chinogadzirisa chinoshandurwa kubva kumamita kusvika madhigirii uye mhedzisiro ini yandinofanira kupa iri 89 ° yakareba uye 13 ° latitude, asi yakandipa 89 ° uye 2 ° latitude shandisa 16 zone uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero hemisphere ndinoda kuziva zvazvinoita
RAUL MACIAS VALDEZ inoti:
pane google mwoyo vhezheni inobvuma kuisa mapepa neUTM kuronga ndeye 6.2.1.6014 (beta)
Iwe unonyorera pahukama hunoti:
Pano iwe unogona kutora
Kana pane bhatani rinoti "tenga izvozvi"
Luis Gallardo inoti:
Handigoni kuwana nzira yekuendesa madhora e2 uye ini ndinoda kutora iyo inogadzirisa fomu yevashanduri nokukurumidza.
Chokwadi, ibva pane mesh. Inowanikwa ipapo.
Ok uye pane chero mukana wekuwana mepu yeVenezuela iyo inondiudza kubva kune iyo nzvimbo iyo spindles kana nzvimbo dzinowanikwa?
REGVen WGS84 yakafanana neUTM WGS84
Hi, ndine zvinganetseka. iyo mihizha yeUTM iyo yakafanana REGVEN? ndechokuti ndinofanira kuziva nzvimbo iyo Venezuela yakakamurwa nayo, iwe unogona kundibatsira nezvo zvinofadza here?
Mune zvimwe zviitiko zvinogona kuitika kuti kudhanilodha kunomira, kana kuti iyo Proxi kubva kwauri kubatanidza inovhara kurodha. Nekudaro, kana izvi zvikaitika, iwe unogona kuzvizivisa netsamba.
Takatumira template ku email yako.
heeeey kubhadhara dhora 2 uye usanditendera kuti ndiwedzere kuapure template
Chii ini ndinoita?
Ichishanda nemunzvimbo ipi neipi
Ndinoreva iyo 14 zone kana inoshanda nematunhu ese
Iwe 14 unorevei?
Izvi zvinoshanda here ku14?
Haikwanisi, Google Earth haigamuchire kurongedza kuisirwa muUMF fomu. Chinhu chinonyanya kushanda ndechekuti unozviita neiyo GIS chirongwa senge Microstation, gvSIG kana QGis, wozozvitumira ku kml kuti uzvione muGoogle Earth.
Enrique Arizabalo inoti:
Hi, tarisai, ini ndiri kufarira munharaunda. Ndinoda kuziva kuti ndinopinza sei hutano hwangu utm kuenda kuGoogle pasi kare.
Gumiguru, 2011 pa
Mhoro Miguel. Nezve mubvunzo wako:
-Iyo inoronga iyo Google Earth inoratidza uye avo vaunoreva kwavari ndevaya vanozivikanwa seUTM. Iyi sistimu inogovera makondinendi munzvimbo dze60 dzinoenda kubva padanda kuenda padanda, 6 degrees refu imwe neimwe. Munzvimbo yekuMabvazuva, dunhu rega rega rine 500,000 seyakakadzika samidhiya uye nekudaro rinowedzera kana kuderera kudzamara rasvika pamuganho wenzvimbo, nekudaro East yekubatanidza inodzokororwa munharaunda yega yega, asi haina kumbobvira yakaipa. Mupfungwa yekuchamhembe, inotangira pa zero kubva ku equator, yakananga padanda rekuchamhembe uye kumaodzanyemba hemisphere inotangira padanda kusvika yasvika ku equator.
Iyi sistimu inokonzeresa kunetseka kune nyika dzinobatanidzwa munzvimbo dzinopfuura imwe chete, muColombia iri pakati penzvimbo dze17, 18 uye 19. Uyezve, ine peculiarity yekuve nechikamu muchikamu chekumusoro hemisphere uye imwe kumaodzanyemba hemisphere.
Saka nyika inosarudza kusarudza mhedzisiro yenhema, kuderedza kuoma kweizvi, uye ndicho chikonzero hazvikwanisi kuti hurumende dzienderane neaya inoratidzwa neGoogle Earth.
Kuita shanduko, Geographic Institutes ine ruzivo rwakadai seizvi:
Iwe unogonawo kutarisa pazvibatanidza izvi:
Painopinda peji yewebhu, nokuti ndanga nditsvaga ruzivo rwemasangano iyo ini mashoko pasi apa:
Mepu yeColombia yakagadzirirwa neGGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi), mapuratiro emepu yakataurwa ichinyatsoenderana nemiganhu yeGoogle Earth mepu:
Somuenzaniso, mepu Coordonatele pamusoro Colombia, kuwana chinhu chaipo chete kumaodzanyemba Puerto Wilches 1021223E, 1302614N Coordonatele idzi asingakwanisi kuwana map Google Earth, aikwanisa kutsanangura musiyano uyu?
Pamusoro pezvo, senge nyaya yekuda kuziva, inotora kubva kuGoogle Earth mepu, zvakanyanya mudhipatimendi reNariño zvinoonekwa kuti marongero ayo anobva kuWest kuenda kuEast, isu tinotora nyaya yeTumaco, iri mu748650 E, tikaramba tichienderera pamwe takananga Kumabvazuva, zviri kurova kuti kana uchisvika ku833969E uye inochinja nguva pfupi kusvika 166030E. Zvinoitikawo kuti muGoogle Earth kubva equator kuenda kuNorth inotanga mu0.0, zvisinei mu IGAC ine inogadzirisa yayo ku equator.
Mukupedzisa, shanduko dzingaitwe sei kubva kumakanika e IGAC kuenda kuGoogle Earth?
Ndinokutendai mberi nekubatsirana kwako kwekukosha mukutsanangura iyi mamiriro ezvinhu akavhiringidza.
kwadzakabva basa Gabriel Ortis Very zvakanaka, ini yaishandiswa Win XP asi ini ufambe kuna W7 uye ndaigona kuramba kurishandisa, rinobatsirawo chaizvo kupedza kunongedzera kml faira kuti anoverenga Google pasi, kana iwe ndipei email ndinotuma kwadzakabva.
Zvechokwadi, ingosiya mapepa asina kubharika.
Isa zita rako ... inoti:
kana ini ndisina mitsigira ini ndinogonawo kuvashandura kuti utm ???
Oscar alvarado inoti:
chinhu chakakura chekuita zvakafanana kuti uchinje UTM inosangana ne geographies
ARNALDO SALAZAR inoti:
Ini ndakaiyedza pamwe nematanho ekubatanidza eNational Cartography yeVenezuela uye inopa mhedzisiro imwe chete. ndatenda
Ndinokutendai zvikuru pamubatsiro wenyu.
Vitos, kuti uite kutendeuka kumashure, kana kubva Geographical kuenda kuUTM unogona kutarisa iyi Geofumadas inosangana
Ini ndoda kushandura iyi data W 14 ° 51 '16.59 »YS 90 ° 51' 50.1» kuenda kuUTM
Svondo, 2010 pa
Mupiro mukuru iwoyo, unoshanda wakakwana munenge mamiriro ezvinhu ose, asi uri pamiganhu yenzira. Ndinokutendai zvikuru nekugovana nayo pawebhu.
Kuvonga nekugovera maatafura nevanhu.
iyo inoshandiswa zvikuru
1 Giga Ndinokutendai mupiro mukati Blog ino, kupfuura kunaka, clickcidades (wekuvamba informatic Makorokoto !!) aigona kukopa Excel spreadsheet enzvimbo kuti UTM, asi kubatana wakapiwa pano asingagoni, kureva UTM kwavanogara, vamwe chaiwo rinoratidza?. Mazvita.
victor ramirez inoti:
Icho chishandiso chakanakisa ...
Kune vanhu vane dzimwe nguva vane hutsinye uye vasingade kugovera ruzivo rwavo asi ini ndinoona kuti mune rupo ..
enda mberi ..
Maererano neizvi link:
Google Earth inoshandisa nzira yakajeka yokugadzirisa uye Datum WGS84
Argentina inosanganisira nzvimbo dze 18,19.20,21,22 maererano ne Iyi link
Ndinofanira georeference mufananidzo BS. Sezvo., Argentina pamwe pfungwa dzakatorwa kubva Google pasi, mumwe anoziva spheroid uye datum kushandisa nzvimbo Google Earth uye Argentina ndiyo? Kuti ndiite georeferencing, Erdas anondibvunza kuti iyo data.
Chokwadi, in ichi chinobatanidza naGabriel Ortiz Unogona kuona maitiro.
Hi! Mupiro wakanaka chaizvo. Zvisinei, iwe unogona here kundipa nzira yekuita nayo chete nechinotakura?
Thanks! uyekwazisa kuSpain!
utm geographic inoronga shanduri
Aiwa, pfungwa yakanaka
Ndinofunga iwe UTM, kutevedzera Coordonatele iri Excel tafura, zvichiratidza zviri uye uve nenzvimbo sezvo well'll nazvo mune dzimwe nzvimbo, kana zvino chichaitika UTM mune dzimwe nzvimbo iyo nzvimbo, utore kutendeuka hutungamiri hwenyika uye maitiro ekutm, kusarudza imwe nzvimbo.
Hi, ini ndine deta yakatorwa muutm munharaunda ye16 asi ini ndinofanira kuvashandura kunharaunda ye15 kuti ndinozviita sei
Pakati pe geographical coordinate uye UTM hapana chakaipa, zvakafanana.
Kana iwe uchida kunzwisisa chirevo chekuita kutendeuka, Gabriel Ortiz anotsanangura iri munyaya ino.
chaizvo zvakanaka chidobi kwenyu, asi ndinoda kuziva kuti kuita shanduko, asi kwete digitaalinen ndiri Engineering mhuka mudzidzi kugadzirwa stoy kudzidza kuchengetedza ivhu uye mvura, panhau iyi ndinobvunza kuratidza Masvomhu uye kuona kukanganisa pakati izvi Coordonatele maviri, kwete nzira yekuzviita Ungandibatsira here? chinhu chinonyanya kukosha ndechokuverenga mhosho pakati pezvibatanidza zviviri!
Iwe unofanira kuona nzvimbo inofanirwa kuGoogle Earth, nokuti muColombia the 17,18 uye 19 nzvimbo dzinowirirana
Hi! Pinda nheyo dzenharaunda dzenharaunda kuti uende nadzo kune dzakapfa asi mhedzisiro yandinowana handiyo yandaitarisira. Ndinoda kuti shanduko yezvikwata muColombia. Ndoshanduko ipi yandinofanira kuita?
Hi! NePlex.Mark! Iwe unogona kushanda nehurongwa hwehutano hwako muGoogle Earth:
hello! Mumwe munhu anoziva nzira yandinoenda nayo kubva kuUTM kusvika kuGeograficas (madigiri) asi mune zviduku, kwete mumaminitsi kana masekondi.
Pane chimwe chinhu chakakosha chinondibvumira kuita izvi here?
Ndinokutendai nguva yenyu, uye zvakare zvakare maGeofumadas makuru ..!
Geofumadas naGabriel Ortiz, ndinokutendai nokuda kwekuda kwenyu kubatsira vamwe! kubva kuPeru ndinokukwazisai ..!
GERARDO C inoti:
BASA ZVAKANAKA UYE ITA Makore mashoko wenyu uye zvakanyanya zvechokwadi vakanaka zvakanaka, ndine dambudziko WITH kuchinja Coordinates UTM kana nenzvimbo ndege, KUTI KUDIWA kurangana IN MUNDA WITH LIVE MATANHO KANA ndege kwakavakirwa BASE Data PFUNGWA mumunda Nokusangana UTM anoona kana nenzvimbo mararamiro PEDYO iratidzwe achangobva ERROR UTM Coordonatele, OJALA anogona kundibatsira
Kune avo vangave vanofarira ini ndinosiya kero pe peji rinokubvumira kuti uwane magwaro ehurumende uye UTM pane chero ipi zvayo:
UTM Flayer yapera, mapurogiramu akawanda eZonum akagadzirwa nenzira iyo.
Unogona kutendeuka ne Excel template
Shamwari Oliver, NOD 32 haisi yemahara kwemazuva anopfuura 30. Kana iwe uri kutsvaga peji kuti uzvitenge:
Kana iwe uchida mushonga wekare unosununguka usingapera, edza Avira
J. Oliver Garcia Rizo inoti:
Iwe unogona kundiitira nyasha yekundiwana ESET NOD 32 antivirus, ndinozvifarira.
Pane urongwa hweUTM Flyer, kuti uite kuti vashandurwe muGoogle vakandipa ini, asi zvainge zvatofa, iwe unogona kundibatsira uye ugozvipa kwandiri, kuitira kuti zvirege kupera.
MuNicaragua, tinoshanda mu16 uye 17 Zone, mumwe munhu anogona kundibatsira.
Ndinofanira kuwana chirongwa cheUTM Flyer kuti chifambe kubva kuUTM nhamba yeNAD 27 Central kusvika kuGeografica muGoogle Maps
Ini ndinofunga izvo zvinoreva kuti: Zone 18, x = 338552 y = 9065052 kumaodzanyemba hemisphere. Edza iyo pane iyo template. Iwe uchagara mune dhumamu
mauro jimenez nartel inoti:
NDICHAVANYA RUDZIVA RUDO RANGU KUTI VATSVIKE UTM ZVIRANGO KUTI GEOGRAPHICAL CORDINGS DATA IS AS FOLLOWS:
SOUTH UATU UTM 9065052
Ndinokutendai nokundibatsira kuti ndiite basa rangu
kumavirira kwenguva 18L0338552
Uthern South UTM 9065052
Ndakagamuchira email kubva kuna Mario Sanchez iyo inotitaurira kuti kuitira kukurumidzira basa rake (ari kudzidza maitiro ekufudza makwai achishandisa GPS-GPRS makorani) akawedzera mutsara yematafura kubva kubva ku decimal kuenda kune zvekuita zvega zvega uye kuti izvi Chigumisiro chacho chinowanikwa zvakananga mune geofumed template inoratidzwa munyaya ino.
Yakawedzerawo mamwe mazano kuverenga kureba pakati pemakwikwi maviri uye kana iwe une nguva yekutora nhaurirano iwe unowanawo nguva yekufamba.
Akafunga kuti zvichida zvingabatsira kune mumwe munhu saka akazvitumira uye pano vane faira nemarongwa.
Excellent tool congratulations
Chengetedza nomenclature iyo Gabriel Ortiz calculator inokumbira
Nzira dzakarurama dzekutaura:
434156.35 4804758.33 102.44 (nzvimbo imwe neimwe pamutsara, kutanga ye X uye ipapo Y. Z dzinosarudza.)
Shandisa nzvimbo isina chinhu kana tabha kuti uparadzanise hutano hwe X uye Y, uye iwe Z.
Kana iwe uri kuisa iyo comma, izvo zvinokutambudza iwe.
JAVIER CRUZ inoti:
Ndinofanira kushandura X, Y kuratidzira kuhutano hweUTM
Ini ndapinda iyo data muCARTOGRAPHIC COORD CONVersOR ye «Gabriel Ortiz». asi haisi kukanda iyo data yandinofananidza nayo.
Iyo data ndeyotevera: X = 622,552.17 / Y = 2,062,181.26
Iyo data ichadzoserwa ndeiyi: N 64 ° 24 '46.02 ″ E
asi hazvibudi paunopinda mairi.
IHUSO yandinopinda ndeyo: 15 inobatanidza Campeche, Mex.
Chii chandiri kuita chisina kunaka?
Ndinotenda nekuda kwekubatsira mberi.
Gumiguru, 2008 pa
mutembenukiro akakurumbira uye nzira yakanakisisa yekudzidzisa kune zvakawanda kuonga basa guru iri. Ndinokutendai zvikuru
Svondo, 2008 pa
Luis Felipe inoti:
iyi ndiyo nzira yekudzidzisa. ndapota tumira kune iyi email. Ndinokutendai zvikuru
Izvo zvakanaka kune mudzidzi akafanana neni. iwe Unogona kunditumira here kumutumwa iyi? Ndinokutendai zvikuru uye zvakanakisisa zvidimbu nemidzi dzidziso dzakachenjera.
Anahí, Iyi chinyorwa kuratidza muenzaniso wawakakumbira, kubva kumaodzanyemba kwekumaodzanyemba neBolivia
Kana iwe ukaisa mu Menu / View / Grid iyo nzvimbo inoonekwa, chero bedzi iwe wakashanda UTM muZvi / Options / 3d View.
Iko basa rakanaka, rinobatsira zvikuru, mubvunzo weBolivia sekuratidzira hutachiona hweUTM huri kurongedza kusiyana kweiyo mu19, 20 uye 21.
Ndinoda kuti mundibatsire kuwana girafu kuratidzira vadzidzi hurumende munzvimbo imwe neimwe.
Carlos Flores inoti:
Kumbongedza, inonyatsoshanda chigadzirwa uye basa rakanaka.
tanga wakukorokotedza iwe nemabasa akasiyana iwe aunoita, nzvimbo yechipiri, nezve chiyero chekupa ruzivo rwako kune vamwe vanhu avo, seni, vanoshaya ruzivo rwakawanda, zvikonzero zvinokwana zvekuti iwe ufambire mberi nerombo rakanaka